Dalalka Yurub qaarkood oo dib u soo celiyay xayiraada COVID 19 - Radio Risaala: Somali News Online
DHAGEYSO:-Warka Subax ee Radio Risaala 15-04-2021
Hoos Ka Dhageyso arka Subax ee Radio Risaala oo uu Akhrinayo Maxamed Cabdi Cali
Home Wararka Dalalka Yurub qaarkood oo dib u soo celiyay xayiraada COVID 19
Dalalka Yurub qaarkood oo dib u soo celiyay xayiraada COVID 19
Magaalooyinka Helsinki, Espoo iyo Vantaa iyo hareeraheeda oo kamid ah Dalka Finland ayaa la go’aamiyay xayiraado cusub laga bilaabo 23.11.2020 waxaana ay socon doonaantaa mudo saddex toddobaad ah, taasoo ay ujeedadeedu tahay sidii lagu joojin lahaa faafista feyruska corona.
Midka ugu weyn xayiraadahaas cusub ee la soo rogay waa, in kulamada guud ee gudaha lagu qabanaayo ama la isugu imaanaayo aanay ka badnaan karin 20 qof. Taa macnaheedu waa in munaasabadaha isboortiga iyo xafladaha kale sida riwaayadaha, aan la qaban karin mudadaas saddexda toddobaad ah ee soo socota, iyadoo intaa kahorna ay howlwadeennada dowladdu arrinka qiimeyn ku sameyn doonaan.
Munsaabadaha gaarka ah ee dadku ay yeelanayaan sida xafladaha dhalashada, kuwa ardeyda, kuwa qoysaska iyo qaraabada sida aroosyada iyo xafladaha diimaha, 10 qof ka badan la isuguma imaan karo.
Dadka waaweyn waxaa khasab ku noqoneysa in ay joojiyaan hiwaayadihii ay aadi jireen, waayo howlaha isboortiga kala duwan ee lagu qabanaayay hoolalka gudaha ah waa la joojiyay. Tusaale ahaan dadka waaweyn ma aadi karaan saddexda toddobaad ee soo socoda hoolalka isboortiga ee magaalooyinka ee lagu ciyaaro ciyaaraha kala duwan. Wixii ka yar 20 sano jir way sii wadan karaan hiwaayadahooda.
Dugsiyada dhexe waxaa isniinta laga bilaabo loo soo jeedinayaa in ay qaataan Afxirashada.
Previous articleSaddex Madaxweyne oo hore oo loo xil saaray xal u helida dagaalka Itoobiya
Next articleSAWIRO: Shir Muqdisho uga furmay Musharaxiinta xilka Madaxweynaha